Siyaase Axmed Cabdi Xaabsade oo ka hadlay Dhul Looga Haysto Muqdisho – Radio Daljir
Siyaase Axmed Cabdi Xaabsade oo ka hadlay Dhul Looga Haysto Muqdisho
Abriil 15, 2015 7:56 b 1
Arbaco, Abriil 15, 2015 (Daljir) — Iyadoo dhawaan Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungaab uu sheegay in dadka soomaaliyeed xamar hantida ku lahaa loo celinayo ayaa hadana waxaa jira dad soomaaliyeed oo cabasho ku muujiyey hanti dooda oo lagu haysto Magaalada Muqdisho kadibna loo diiday.
Siyaasi Axmed Cabdi Xaabsade waxaa uu kamid yahay dadka dhulka ama hantida looga haysto Magaaladda Muqdisho warasyi uu siiyey Warsidaha Sanaagpost ayaa waxaa uu sheegay in dhul uu iibsaday sanadkii 1970-kii looga haysto Magaaladda Muqdisho.
Xaabsade waxaa uu sheegay in dhulkaasi uu dadaal badan u galay sidii loogu soo celin lahaa islamarkaana ay u Saxiixday Maxkamada Sare iyo Wasaaradda hawlaha guud hase ahaatee uu u diiday Masuul kamida Dowladda Hoose ee magaalada muqdisho.
Siyaasi Axmed Cabdi Xaabsade ayaa ka codsaday dowladda federalka soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan dhulkiisa loogu soo cesho waxaana uu sheegay in dowladnimada aysan kamid ahayn in dadka dhulkooda xoog looga haysto.
Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka dad badan oo soomaaliyeed gaar ahaan ka soo jeeda Goballada Puntland ayaa hanti dooda ku waysan Magaalada Muqdisho waxaana arintaan ay ku soo aadaysaa xili madaxweynaha dowladda federalka soomaaliy iyo Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ay sheegeen in dadka Soomaaliyeed ee hantida ku lahaa Magaalada Muqdisho loo celin doono.
Dowladda Soomaaliya oo rag ka tirsan Al-shabaab xukunno ku Fulisay
Dowladda Puntland oo la kulantay Mulkiilayaashsa Hoteelada Bosaaso
isxaaq roble adandheere 3 years ago
isaga as leg hader halo soo celiyo